Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Macaashka hoteelka ayaa kor u kaca, laakiin ma sidaas ayuu ahaan doonaa?
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Warshadaha hoteelku weli waa nugul yihiin, iyagoo ka leexinaya wax kasta oo carqalad ah oo hor leh.
Warshadaha hudheellada Mareykanka ayaa sii wada inay arkaan dakhligooda oo kor u kacaya.
Yurub gudaheeda, waxqabadka hoteelku wuxuu sii wadaa inuu hoos u xoqo.
Aasiya, waxqabadka warshadaha hudheelka Shiinaha ayaa ahaa mid joogto ah.
Waxqabadka huteellada caalamka ayaa bilba bil soo hagaagaya. Taasi waa warka wanaagsan. Walaaca aadka u sii darani waa haddii ay sidaas ahaan doonto. Warshadaha hoteelku weli waa nugul yihiin, iyagoo ka leexinaya wax kasta oo carqalad ah oo hor leh.
Snaggii ugu dambeeyay wuxuu ahaa kala duwanaanshaha Delta, kaas oo sababay in kiisaska COVID ay ku soo bateen aagag badan isla markaana ku tuuray god si tartiib tartiib ah u soo kabashada. Toddobaadkan uun, Midowga Yurub wuxuu ku taliyay in dadka Mareykanka laga mamnuuco safarada aan muhiimka ahayn ee ay ku tagaan waddammada xubnaha ka ah ka dib markii ay kor u kacaan kiisaska laga tiriyo Mareykanka Tan iyo markii Mareykanku uu ka xayirnaa inta badan socotada Yurub.
Si kastaba ha noqotee, warshadaha hoteelka ayaa hore u sii riixaya.
In kasta oo gobollada oo dhami ay haystaan ​​xoogaa waqti ah ka hor inta aysan la jaanqaadin lambarada cudurka faafa ee 2019 ka hor, hagaajinta bil-bil waa dhiirigelin. The USA wuxuu sii wadaa inuu arko kor u kaca dakhligiisa: RevPAR bishii Luulyo 2021 wuxuu ka sarreeyey $ 20 bishii hore wuxuuna hadda ka badan yahay 1,000% halkii uu ka ahaa Abriil 2020, oo ah naadirkii waxqabadka hudheelka.
Deganaanshuhu wuxuu gaadhay 60% bishii, taas oo ka caawisay guulaha shidaalka ee wadarta dakhliga huteelka. Dhanka kale, shaqaaluhu wuu sii socdaa, laakiin sida hoteellada, gaar ahaan suuqyada dalxiiska, dib -u -soo -kabashada, mushahar bixinta ayaa si tartiib tartiib ah kor ugu sii kacaysa. Tixgeli Xeebta Miami: Wadarta mushaharka ayaa ku dhacay $ 92 qol kasta oo la heli karo bishii Luulyo 2021, kaliya $ 18 ayaa ka baxsan heerkeedii Luulyo 2019 iyo 143% ka sarreeya isla isla sannadkii hore.
Dakhliga sare wuxuu gacan ka geysanayaa shidaal siinta macaashka guud ee wanaagsan, iyadoo Mareykanku uu garaacay $ 67 bishii, 18% isla waqtigaas 2019.
Heerarka Heerka Vax EU
Yurub dhexdeeda, halka EU -da heerka tallaalka uu ka sarreeyo Mareykanka, waxqabadka hoteelku wuxuu sii wadaa inuu hoos u xoqo. Taasi, si kastaba ha ahaatee, way is beddeli kartaa sababtuna tahay guulaha tallaalka, oo kor u qaaday dareenka qaaradda oo dhan socdaalayaasha iyo maalgashadayaasha, si isku mid ah.
Bariga Dhexe oo Aan Joogsanayn
Ka dib markii macaashku hoos u dhacay Febraayo 2021 iyo Juun 2021, GOPPAR wuxuu ku soo kordhay bishii Luulyo, isagoo garaacay $ 29, kaliya 11% wuxuu ka sarreeyey heerkii Luulyo 2019 iyo in ka badan 1,900% wuu ka sarreeyey bishii Luulyo 2020, markii GOPPAR uu noqday diidmo.
Isbeddellada dakhligu waxay si dhow u muujiyeen isbeddellada macaashka, oo ah wax soo saarka maareynta kharashaadka la xakameeyey, kaas oo arkay tirooyinka mushaharka oo dhexdhexaad ah ka dib markii ay kordheen bishii Febraayo taas oo gacan ka geysatay hurinta faa'iidada.
Shiinaha ayaa Hogaamiya
Aasiya, ShiinahaWaxqabadkiisu wuxuu ahaa mid joogto ah. GOPPAR ayaa kor u toogtay kadib qoto -dheerkii ugu madoobaa bishii Febraayo. Hadda, laga bilaabo Luulyo 2021, GOPPAR wuxuu $ 2 ka sarreeyaa sidii uu ahaa bishii Luulyo 2021, oo ah muuqaal la yaab leh oo ay u badan tahay inuu sii huriyey xaqiiqda muuqata in kiisaska COVID ee dalka ay hoos ugu dhaceen eber ka dib markii COVID uu dillaacay.